Juventus oo Weli la Joojin la’yahay..Xilli Guul muhiima ay gaareen Kulankii Derby d’Italia+SAWIRRO – Gool FM
CR Shariif December 7, 2018
( Serie A ) 07 Dis 2018. Juventus ayaa boqolkiiba boqol si wanaagsan ugu bilaabatay xagaagan horyaalka talyaaniga welina waa guuldarro la’aan kaddib markii ay guul muhiima ka gaareen Inter Milan kulankii Derby d’Italia oo ay kaga badiyeen 1-0.
Kulanka ayaa qeybta hore lagu kala maray goolal la’aan 0-0, iyadoo laba dhinac ay sameyeen furado dhawra.
Jaaniskii ugu wenyaa wuxuu soo maray Inter Milan oo hogaanka u qaban kartay dheesha balse isku daygaa wuu qasaaray markii kubbad uu laaday laacibka Roberto Gagliardini ay ku dhacday birta juventus.
Daqiiqado aan sidaa u badneed kaddib markale inter ayaa heshay fursad halisa waxaa banaanka goolka mariyay Ivan Perisic.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha labaad labada koox ayaa halkooda kasii watay cayaar heer sare ah.
Waxaanka suura gashay in Juventus ay hogaanka kulanka qabtaan waxaana goolka ay ku badiyeen u dhaliyay Mario Mandzukic daqiiqadii 66-aad kaddib kubbad uu madax la helay taaso uu soo dhigay Joao Cancelo.
Guusha Bianconeri ayaa ka dhigan in hogaanka ay ku qabtaan 11-dhibcood waxayna lee yihiin 43-dhibcood halka Inter ay 28-dhibcood la fadhiso booska 3-aad.
Shaxda rasmiga ah kulanka Derby d’Italia kooxaha Juventus Vs Inter